Kali Linux 2019.3 inosvika neLinux 5.2.9 uye maturusi matsva | Linux Vakapindwa muropa
Maawa mashoma apfuura, Anogumbura Security aive nemufaro we zivisa KaliLinux 2019.3, iyo nyowani vhezheni yake yekushandisa system ye «yetsika kubira». Kunge Vakatsanangura kare, kubva pakuburitswa uku, kugovera kuchange kuchiwanikwa mumhando nhatu dzakasiyana: Kali Linux Mwenje, Kali Linux Yakakura uye Kali Linux. Tichava nemisiyano pakati peshanduro nhatu muhuwandu hwezvishandiso, neakakodzera iwo muChiedza vhezheni, mamwezve mune Yakakura vhezheni uye yakakwana seti muKali Linux.
Sezvinoitwa nevakagadziri vazhinji pavanoburitsa vhezheni itsva dzekuparadzira kwavo, Inogumbura Security yatora mukana wekuburitswa uku kugadzirisa iyo Kali Linux kernel, iri ikozvino Linux 5.2.9. Iyo inonyanya kukwira-ku-zuva vhezheni yeiyo penguin masisitimu kernel ndeyeLinux 5.2.11, saka kambani yakasanganisira ingangoita yazvino vhezheni iripo.
Kali Linux 2019.3 iri mumhando nhatu dzakasiyana
Zvimwe zvinhu zvitsva zvinowanikwa mune iyi vhezheni ndeizvi:
Yakagadziridzwa rutsigiro rweARM zvivakwa.
Zvitsva zvekubatsira zvinyorwa zvinoita kuti zvive nyore kuwana ruzivo nezve mapakeji.
Dzorera Windows binaries neWine. Zvine musoro, zvinongokwanisa kumhanya nenzira kwayo izvo zvinowirirana neWine (ini ndichaedza izvi muPamoyo Session kudzikamisa kuda kuziva).
Yakagadziridzwa NetHunter. Ikozvino inotsigirawo LG V20 (yepasi rose edition), Nexus 5X, Nexus 10 uye iyo OnePlus 7 (ivo zvino vanokurudzira iyo OnePlus 7 seyakanakisa chishandiso chekumhanyisa NetHunter).
Tsigiro yakawedzerwa iyo PINEBOOK, iyo Window Gateworks, uye iyo Raspberry Pi 4.
Yakagadziridzwa rutsigiro rweiyo Raspberry Pi Zero W.
Tsanga nyowani dzeODRIDID-C2 uye mamwe maRaspberry Pi zvishandiso.
Vashandisi vanofarira vanogona kudhawunirodha vhezheni itsva kubva Iyi link, uko iwe kwaunowana iwo matatu akambotaurwa kuendesa mune makumi matatu neshanu / makumi matanhatu neshanu shanduro dzine default graphical enharaunda dzeKali, LXDE, MATE, KDE, XFCE, E32 uye mifananidzo yeVMware uye Virtualbox chaiyo michina. Dzimwe nharaunda dzemifananidzo dzinowanikwa chete mu64bit.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kali Linux 2019.3 inosvika neLinux 5.2.9 uye maturusi matsva kutarisa kuchengetedzwa kwemakomputa edu